Google က နောက်ဆုံးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Tasks App ဆိုတာဘာလဲ?
30 Apr 2018 . 7:09 PM
တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ မေ့တတ်တဲ့အကျင့်ရှိရင် ဒါမှမဟုတ် လုပ်စရာတွေများလို့ သေခြာမှတ်ထားဖို့လိုရင် စာအုပ်သေးသေးလေးနဲ့ ခဲတံတစ်ချောင်းသုံးတတ်တဲ့သူတွေအတွက် Google ရဲ့ Tasks App လေးက ကူညီပေးမှာပါ။ Tasks App ကတော့ စာရင်းလုပ်တဲ့ App လေးပါ။ လုပ်စရာရှိတာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရေးလိုက်ရုံပါပဲ။
Task App ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ AddaNew Task ဆိုတဲ့ ခလုတ်အကြီးကြီးကို အရင်တွေ့ရမှာပါ။ တစ်နေ့တာ အတွင်းမှာလုပ်စရာတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်နေ့တွေအတွက် လုပ်စရာရှိတာလေးတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်မှတ်သားထားဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ AddaNew Task ကိုနှိပ်ပြီး ရေးစရာရှိတာရေးမှတ်ပြီးရင် Save လိုက်တာနဲ့ ရပါပြီ။ Task တစ်ခုအတွက နောက်ထပ် Task အပိုလေးတွေ ကိုလည်း ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။
လုပ်စရာရှိတာလေးတွေက များတယ်၊ ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်စေချင်ရင်လည်း List အသစ်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ AddaNew Task ရဲ့ဘယ်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ Menu Button လေးထဲကနေ List အသစ်တွေကို ထပ်ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဈေးဝယ်ဖို့စာရင်းနဲ့၊ သွားစရာနေရာ စားရင်းတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်အောင် ခွဲခြားထားလို့ရပါတယ်။ နောက်ရက်တွေအတွက်လည်း ကြိုမှတ်ထားလို့ရတာကြောင့် အဆင်ပြေပါတယ်။ အလုပ်များတဲ့သူတွေအတွက် လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ မမေ့ရအောင် ဒီ App လေးကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ Google ကထုတ်ပေးတာဆိုတော့ တော်တော်လေး သပ်ရပါပါတယ်။ ရှုတ်နေတဲ့ Feature အပိုတွေလည်းမပါပါဘူး။ Android မှာရော iOS မှာရော အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Google က နောကျဆုံးထုတျပေးလိုကျတဲ့ Tasks App ဆိုတာဘာလဲ?
တဈခုခုလုပျဖို့ မတေ့တျတဲ့အကငျြ့ရှိရငျ ဒါမှမဟုတျ လုပျစရာတှမြေားလို့ သခွောမှတျထားဖို့လိုရငျ စာအုပျသေးသေးလေးနဲ့ ခဲတံတဈခြောငျးသုံးတတျတဲ့သူတှအေတှကျ Google ရဲ့ Tasks App လေးက ကူညီပေးမှာပါ။ Tasks App ကတော့ စာရငျးလုပျတဲ့ App လေးပါ။ လုပျစရာရှိတာတှကေို လှယျလှယျကူကူနဲ့ ရေးလိုကျရုံပါပဲ။
Task App ကိုဝငျလိုကျတာနဲ့ AddaNew Task ဆိုတဲ့ ခလုတျအကွီးကွီးကို အရငျတှရေ့မှာပါ။ တဈနတေ့ာ အတှငျးမှာလုပျစရာတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ နောကျနတှေ့အေတှကျ လုပျစရာရှိတာလေးတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျမှတျသားထားဖို့ လှယျကူပါတယျ။ AddaNew Task ကိုနှိပျပွီး ရေးစရာရှိတာရေးမှတျပွီးရငျ Save လိုကျတာနဲ့ ရပါပွီ။ Task တဈခုအတှက နောကျထပျ Task အပိုလေးတှေ ကိုလညျး ထပျထညျ့လို့ရပါတယျ။
လုပျစရာရှိတာလေးတှကေ မြားတယျ၊ ကှဲကှဲပွားပွားဖွဈစခေငျြရငျလညျး List အသဈလုပျလို့ရပါသေးတယျ။ AddaNew Task ရဲ့ဘယျဖကျမှာ ရှိတဲ့ Menu Button လေးထဲကနေ List အသဈတှကေို ထပျဖနျတီးနိုငျပါသေးတယျ။ ဈေးဝယျဖို့စာရငျးနဲ့၊ သှားစရာနရော စားရငျးတှကေို သပျသပျရပျရပျလေးဖွဈအောငျ ခှဲခွားထားလို့ရပါတယျ။ နောကျရကျတှအေတှကျလညျး ကွိုမှတျထားလို့ရတာကွောငျ့ အဆငျပွပေါတယျ။ အလုပျမြားတဲ့သူတှအေတှကျ လုပျစရာရှိတာလေးတှေ မမရေ့အောငျ ဒီ App လေးကိုသုံးသငျ့ပါတယျ။ Google ကထုတျပေးတာဆိုတော့ တျောတျောလေး သပျရပါပါတယျ။ ရှုတျနတေဲ့ Feature အပိုတှလေညျးမပါပါဘူး။ Android မှာရော iOS မှာရော အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။